Ama-20 + ama-DIY Baby Shower Decorations Kulula kwaye kuyathandeka - Ukunikewa Izipho Zomntwana
Ama-20 + ama-DIY Baby Shower Decorations Kulula kwaye kuyathandeka
Imihombiso yeshawari yekhaya yokuhombisa ingaba intle nje njengezinto ezithengiweyo ezivenkileni ohlala uhlawula intywenka encinci. Ukuhonjiswa okwenziwe ekhaya kukhuthaza incoko kunye nokunconywa kwaye kubaluleke ngakumbi kubazali kuba beyenziwe ngothando nenkathalo. Ezi zinto zingama-20 zintle kunye nobuchule zokuhombisa zabantwana ziza kuseta iqela!
I-DIY Baby Shower Decorations yeeTafile
Wonke umntu uthanda indawo ephambili! Xa ucwangcisa ukuhombisa, kufanelekile ukuchitha ezinye izinto kunye nobuchule kwitafile yakho esembindini. Iindwendwe zichitha ixesha labo elininzi behleli etafileni besitya, bezonwabisa, kwaye bedlala imidlalo, izinto eziphambili, iitafile, kunye nokuhonjiswa okunxulumene netafile kugcina kukufumana ii-eyeballs ezininzi kubo. Le mihombiso yokuhombisa yabantwana yokuhombisa emnandi kwaye elula yeetafile iya kuncedisa nawuphi na umxholo okanye i-vibe.
Intombazana entle kunye noNwabisayo yokuhombisa abantwana
Ukuhonjiswa ngokugqibeleleyo kwabaNyana ngabaSana
Imifanekiso yeeNtsana zokuThanda abaNtwana
Usebenziso lweBhasikithi yokuHlanganisa abantwana
Ukuba uyawazi umxholo wabantwana abancinci, unokwenza izinto ezithandekayo neziluncedo kakhulu ezihambelana nomxholo. Iibhasikithi eziphambili kufuneka zisebenze ngenjongo yokuhombisa kunye nenjongo, ke ubeke ingcinga kwinto engena nganye nganye njengoko oomama bexesha elizayo banokufumana ukusetyenziswa okungathandekiyo kwimixobo yebhasikiti emva kweshawa.
ngowuphi umhlaba olungele ukukhula kwizityalo
Ukuthenga izinto ezibalulekileyo zabantwana ezinje ngeethoyi ezifakiweyo, iisimboli, iincwadi, ukufumana iingubo, iirash, iithoyi zokuthambisa, iiringi zokufaka amazinyo kunye neepacifiers. Cinga ngemibala kunye nemixholo yeshawa yosana kwaye uthenge izinto ezifanelekileyo kumxholo.
Thenga intle, uhombise iibhasikiti eziza kusebenza njengeziseko zetafile. Fumana itafile nganye yeendwendwe.
Beka izinto zokugcwalisa ngomnyhadala kwibhasikithi kwaye uzilungiselele izinto zakho kakuhle.
Bopha iribhoni ehambelana nombala okanye ezinye iibhaluni ze-helium kwisiphatho.
Beka ibhasikidi enye kwitafile nganye yeendwendwe.
Indawo yokubhabha yengubo
Umama omtsha akanakuze abe namalaphu e-burp amaninzi, ke le mihombiso eyenziwe yasetyenziswa kwakhona emva kokuba umntwana efikile. Kuya kufuneka ucwangcise kwilaphu elinye le-burp ngondwendwe / kuseto lwetafile nganye, ke yazi inani leendwendwe ezihamba ixesha elide ngaphambi kokuba zihlambe okanye zenze iindawo ezininzi ezithe kratya xa uluhlu londwendwe lutshintsha. Le projekthi ithatha ixesha ukuyigqiba, ke cwangcisa ukwenza iiplacemats zakho kakuhle ngaphambi kweshawa kwaye ucele uncedo lwabahlobo abanobuqhetseba.
Thenga amalaphu e-burp amhlophe ngesixa (enye yeendwendwe zeshawari nganye kunye nezinto ezongezelelweyo.)
SebenzisaIipeyinti zelaphu, Yenza uyilo oluhle lomda olujikeleze umda welaphu ngalinye le-burp. Isibhakabhaka ngumda apha!
Vumela ngamnyeilaphu lokugqekezayome ngokwemikhombandlela kwiipeyinti zelaphu. Ezinye iipeyinti zincoma uku-ayina emva kokumisa ukuseta uyilo ngokusisigxina.
Ngomhla weshawari, beka indawo kwindawo nganye njengoko ulungisa iitafile zakho.
Imisesane yabantwana eyonwabileyo yeNapkin
Le projekthi ayinakuba lula, kwaye elona candelo lililo kukuba, isebenza ngokupheleleyo kubazali abatsha. Uzakufuna i-assortment yamasongo okuxubha, i-pacifiers ephethe izibambo, kunye namakhonkco esitshixo omntwana. Qengqa iingubo zakho zelaphu ezintle uze uzifake kumakhonkco kwezi zinto. Beka i-napkin nganye kunye nomsesane kwindawo nganye ebekwe kwiitafile zeendwendwe. Qiniseka ukuba ukhetha uluhlu olululo lwezi zinto kuba iindwendwe zingaziphindisela kumama oza kubakho.
Iindawo eziphezulu zabantwana
I-topiaries eziphefumlelweyo zabantwana ziya kufumana ngokulula ikhaya kwiitafile zeendwendwe zabantwana. Le projekthi ifuna abasebenzi abaninzi, ke zinike ixesha elaneleyo lokugqibezela yonke into ngaphambi kokuba uhlambe okanye udibanise iqela labahlobo abanobuqhetseba abafayo ukuphuma ezindlwini zabo kwaye babambe isandla.
Ukwenza i-topiary nganye yendawo ephambili, uya kudinga:
Ibhokhwe yodongwe eyi-5-intshi
Ibhola enye ye-5-intshi ye-Styrofoam
Ipeyinti ye-Acrylic kwimibala ye-pastel eyahlukeneyo
Iseti ye izitikha zomntwana (ipakethi enye ngembiza)
Umpu weglue oshushu kunye neencam zeglu
Incinci, iirosi ezomileyo kunye nokuphefumla komntwana okanye iintyatyambo zefeksi
Ibhulashi yepeyinti yesiponji
Ukwenza ii-topiaries zakho:
Yenza ipeyinti engaphandle kwembiza nganye kunye nemibala oyikhethileyo kwaye yeka iimbiza zome.
Hombisa iimbiza ngezitikha kunye / okanye iribhoni
Ukusebenza ngembiza enye ngexesha, sebenzisa ibhondi yeglue eshushu ejikeleze irim yangaphakathi, kwaye ucinezele ibhola yeStrofoam embizeni.
Ukuqala ujikeleze umda ongaphandle, glulela iiroses kwiibhola, ukongeza amayeza amancinci okuphefumla komntwana ukuzalisa naziphi na iindawo ezivulekileyo phakathi kweentyatyambo. Iintyatyambo ze-Faux zinokuncanyathiselwa okanye zifakwe isiqu kuqala kwibhola ye-foam.
Xa zonke iibhola zeSyrofoam zigutyungelwe kwaye iglu isetiwe, iindawo zakho eziphezulu zilungele ukubonisa.
Amaqebengwana e-diaper athandwa kakhulu kule minyaka idlulileyo, kwaye enza umsebenzi ophindwe kabini njengezipho kunye nokuhombisa. Uzakufuna malunga ne-22 ecacileyo okanye eprintiwe i-diapers, i-tape, kunye nebhebhoni eyaneleyo yokubopha kuwo onke amanqanaba amathathu.
Ukuqala kwicala elinye, qengqa ilweyile nganye ibe yityhubhu, kwaye usebenzise isiqwenga seteyipu ukukhusela iityhubhu,
Yima iibhubhu ezintathu ekugqibeleni kwaye ubophe ubude bebhebhoni ngeenxa zonke ukuze wenze umgangatho ophezulu.
Hlanganisa iityhubhu ezisixhenxe kunye, enye phakathi kunye nezintandathu eziyingqongileyo, kwaye ubophe okuhleli kunye neribhoni.
Hlanganisa iityhubhu ezilishumi elinambini kunye, ezintathu phakathi kunye nezisithoba ezibangqongileyo, kwaye uzibophelele kunye neribhoni.
Gcina onke amanqanaba amathathu kunye kunye nokwenza ikhekhe lokugqibela le-diaper.
Iibhotile zebhotile zabantwana
Guqula iibhotile zabantwana zibe ziivazi ezintle ezithandekayo onokuzibeka kwiitafile ezijikeleze igumbi.
Thenga iintyatyambo ezisandula ukusikwa ngaphambi komhla wokuhlamba kwaye uzigcine kwifriji yakho. Uya kudinga okwaneleyo ukwenza isipha esincinci kwibhotile nganye. Ukuba ufuna ukwenza le mihlobiso ngaphambi kwexesha, sebenzisa iintyatyambo ze-faux.
Khulula imisesane kwaye ususe izingono kuzo zonke iibhotile.
Zisongele izangqa kwiibhotile, kwaye gcina iingono ezingxoweni zeplastiki ukuze zisetyenziswe kamva.
Gcwalisa iibhotile ezintathu-kwezine zigcwele ngamanzi. Sukusebenzisa naziphi na izinto ezikhuselayo.
Sika iziqu zentyatyambo kubungakanani, kwaye ulungiselele isipha esincinci kwibhotile nganye.
(Enye indlela) ukuba usebenzisa iintyatyambo ze-faux, gcwalisa emazantsi esiseko ngamatye eetoni anombala oluhlaza okwesibhakabhaka ukulingisa amanzi kunye nobunzima beentyatyambo ezingezizo ezantsi ebhotileni.
Beka iivazi zebhotile kwitafile nganye kwaye ujikeleze igumbi kuyo nayiphi na indawo enokuthi isebenzise umhombiso omncinci.
Emva kweshawa, bilisa zonke iibhotile, ubeke iingono kubo, kwaye uzinike umama oza kubakho.
Umnyama kunye neZiko leLifu
Ukuba uphosa ishawa yomhlobo kumhlobo olindele ibaby rainbow, ezi zimvo ziphambili ziya kuphakamisa ukuhlangana kwaye zichukumise iintliziyo zabantu bonke. Zimbalwa izinto ezifunekayo ukudibanisa ezi zixhobo zeentyatyambo. Kwinto nganye, uya kudinga:
IiVesi okanye abanini abanokuvulwa okuphezulu
Iintyatyambo ezinamagwebu (kwiintyatyambo zendalo, AKUKHO faux)
Iintyatyambo ezimhlophe zaso nasiphi na isiqhamo sokukhetha kwakho (cinga iintyatyambo ezineentyatyambo ezinkulu)
Ukucoca umbhobho ngemibala eyahlukeneyo
Iglu eshushu yokubamba abacoci bombhobho kunye kunye nevazi okanye isiphatho seentyatyambo.
Ukwenza umnyama kunye nendawo esembindini yamafu:
Sika igwebu leentyatyambo ukuze ulungele ngaphakathi kwesikhongozeli sakho okanye ivazi.
Gweba i-foam emanzini kwaye uyibeke ngaphakathi kwisitya sakho.
Sika iziqu zeentyatyambo ukuze zide ngokwaneleyo ukuba zingene kwigwebu kodwa zimfutshane ngokwaneleyo ukuze xa zifakiwe, kubonakale kuphela ukudubula.
Lungisa iintyatyambo ukugubungela ugwebu. Oku kuya kunika isiphumo samafu.
Beka izixhobo zokucoca iipayipi ezinemibala emihlanu ecaleni kwenye ukuze zifane nomnyama. Zijike okanye uzishiye zithe tyaba. Zilungise ngokobunjani bomphathi womnyama uze uzincamathisele kwisikhongozeli. Sebenzisa iglu eshushu ukunceda abacoci bombhobho womnyama babambe imilo yabo.
Amadada kunye neeshawa zosana ludibaniso olungapheliyo. Ukuzonwabisa, kulula, kunye nexabiso eliphantsi eliphambili, cwangcisa idakhi zerabha kwizitya zeglasi. Nganye yezi zinto zokuhombisa zetafile, uyakufuna:
Iglasi yokuloba iintlanzi
Ecacileyo neblowu amatye okuhombisa (kwanele ukugcwalisa isitya ngasinye kunye no-½ phezulu.)
Uninzi lweedada zerabha
Kwisitya ngasinye, galela amatye ukuze ugcwalise isitya phakathi kwe-¼ kunye ne-½ indlela enyukayo. Cwangcisa idada zerabha phezu kwamatye. Boom. Oku akunakuba lula ngakumbi.
Uninzi lweePops zeCake
Esinye isiseko sokuzonwabisa esiza kuba nendawo kuyo nayiphi na itafile yedessert sisipha seelollipops. Kwiphepha ngalinye le-lollipop ofuna ukuyila, uya kudinga:
indlela yokuthetha nomfana emnxebeni
Ibhola enye ye-Styrofoam eya kulunga ngaphakathi embizeni ukuze inxenye yebhola isembizeni kwaye uninzi lwembiza ingaphezulu komphetho wembiza
Ikhekhe pops okanye dum dum suckers
Ukwenza into emnandi yokuhombisa:
Peyinta imbiza nganye kwaye uziyeke zome ngokupheleleyo.
Usebenzisa umpu oshushu weglue, yenza umsesane weglue eshushu ngaphakathi ngaphakathi kwebhotile epeyintiweyo. Beka ibhola ebhodweni uze uyibambe endaweni njengeglue sets.
Cinezela intonga ye-pop okanye ikeyiki kwibhola ye-foam ukuze kungabikho ntonga.
Qhubeka nokutyhala iipopu zekhekhe kwibhola ye-foam de kube ibhola iyonke igutyungelwe kwiisucker.
Iibhanti zeentsana kunye neentyatyambo
Izihlangu zabantwana zixabisekile, kwaye zongeza ukubamba okugqibeleleyo kwiitafile zeendwendwe okanye iitafile zezipho kwishawari yosana. Lo mhlobiso ulula kwaye uyasebenza ixesha elide emva kokuba iphelile ipati. Ukuthenga izihlangu ezininzi zabantwana. Fumana ubungakanani obahlukeneyo okoko ezi zinto zoyilo ziya kuguqula zibe zizihlangu zasebuntwaneni zabantwana abaza kuba. Beka izihlangu kwizithuba ezahlukeneyo ezifuna ukubanjwa kobugcisa. Sika iintyatyambo ezintsha kwaye uzibeke ngaphakathi kuvulo lwezihlangu. Emva kwemvula, nikeza ama-booties amnandi kwi-mama-to-be!
Iingqayi zoMbala kunye nePipi
Akukho tafile ye dessert ihlala igqityiwe ngaphandle kwebha yeelekese. Iibhendi zeelekese ziya kuzishukela iindwendwe zakho, kodwa zisebenza njengezinto ezintle zoyilo nakweyiphi na indawo ngaphambi kokuba kufike ixesha lokuphatha ekhaya.
Thenga izitya zeglasi ezininzi kunye nevazi ezinde okanye iingqayi ngeendlela ezininzi kunye nobukhulu.
Hlela izimbiza etafileni ukuze zikufutshane.
Gqiba ngesikimu sombala weelekese ukuba ungene ezityeni. Le nto yoyilo isebenza kakuhle xa yonke imibala yahluka ngombala omnye, njengemibala eyahlukeneyo eluhlaza okwesibhakabhaka okanye epinki.
Thenga iintlobo ezahlukeneyo zeelekese ukuze uzifake kwisitya ngasinye. Izimbumbulu ezinkulu, izinti zeelekese ezintle, kunye nezinye iilekese ezilukhuni zonke zizinto ezifanelekileyo.
Gcwalisa isitya ngasinye ngohlobo olwahlukileyo lweelekese. Gcina imixholo kwibhotile nganye igcwaliswe ngeelekese ezifanayo ukunika into yokuhombisa umtsalane, ubumnandi, kunye nesibheno se-monochromatic.
Ukuvalwa kwetheyibhile yokuhlamba umntwana
Ngezixhobo ezimbalwa ezilula, nkqu nezembozo zakho zetafile zinokuba yinxalenye yokuhombisa. Itheyibhile eyenziwe ngokwezifiso igubungela uncedo lokudibanisa imixholo yeshawa yabantwana kunye kwaye yongeza ukubamba nkqu nenkcukacha ezincinci.
Itheyibhile yamaphepha emhlophe enye okanye nangaphezulu
Iipampu zesitampu ngombala omnye okanye emibini
Izitampu zerabha zomxholo wosana
Ukwenza izigqubuthelo zakho:
Ziqhelise ukunyathela kwi-napkin yamaphepha kuqala ukuze ugqibezele ubuchwephesha bakho ngaphambi kokuba uqalise ukugalela ingqokelela.
Yandlala isiciko esinye ngexesha etafileni.
Cinezela isitampu kwi-inkpad.
Phinda de ikhava yakho izaliswe zizinto ezininzi njengoko ufuna. Gcina isitampu sonke setafile ngokungahleliwe, okanye sebenzisa izitampu ukudala imida emaphethelweni angaphandle.
I-DIY Baby Shower Decorations yokuba wonke umntu uya kufuna ukuthatha ikhaya
Ukuhonjiswa kuphucula naliphi na itheko, kubandakanya neeshawari zabantwana. Le mihlobiso emnandi kunye nengqiqo ye-DIY yokuhlamba abantwana iya kuba nendawo kuyo nayiphi na ipati kwaye iindwendwe zibuze ukuba zingazibamba na emva kokuba ibhasi iphelile!
Ukuma komntwana uphawu
Lo mqondiso mhle unokuhonjiswa nangaliphi na inani leendlela. Unokupeyinta iileta, uncamathisele iintyatyambo zesilika kubo, uzigqume kuyilo lwesitampu serabha, okanye ukongeza ezinye izinto zobugcisa kwiileta kwimvelaphi yomthi. Imikhombandlela apha yeyokugubungela iribhoni ngenkangeleko yokubonisa abantwana. Okwangoku, ukuba nje unonobumba abafunekayo, izixhobo zobugcisa, kunye nengqondo yokuyila, unokuyila naluphi na uhlobo lokubhalela olufunayo.
bangaphi abantu abaya kutya ikhekhe lephepha lesiqingatha
Iileta zokupela UMNTWANA okanye igama lomntwana oza kubakho, ziyafumaneka ngokobungakanani besiko Ukucinywa koBugcisa .
Ububanzi be-intshi enye yegrosgrain okanye iiribhoni zesatin kwimibala emine ehambelana / iipateni (okanye ezinye izinto zoyilo ezifunekayo ukuhombisa iileta.)
Incinci, i-flat-head tacks okanye i-glue eshushu kunye nompu oshushu we-glue
Nantoni na eyenye into oyifunayo
Ukugubungela iileta zakho:
usuku lomama lomolokazana
Qala ngokubamba isiqwenga sebhebhoni ngasemva kweleta yokuqala.
Vala iribhoni ujikeleze unobumba ngokupheleleyo, ukogquma macala onke.
Gqibezela ngokucinezela ukuphela kwerbhoni ngasemva kweleta.
(Elinye inyathelo ukuya kumanyathelo 1-3: uyilo lweglue eshushu kwiileta.)
Phinda la manyathelo angentla kwileta nganye.
Yongeza nayiphi na eminye imihombiso oyithandayo kwiileta.
Yima umhombiso phezu kwetafile. Faka iteyiphu ephindwe kabini ezantsi koonobumba ukuba kufuneka uzinze.
Wamkelekile uMqondiso weSinxibo somntwana
Olu luvo lulula kodwa luhle kakhulu kwaye luyabiza. Yenza uphawu oluthi 'Wamkelekile Mntwana!' ukusebenzisa uphawuamanabukeni ezilahlwayo, Ipeyinti ekhukhumeleyo , intambo yokunxiba, kunye nemigqomo yokunxiba.
Umtya wentambo yokunxiba kwi-archway okanye indlela yokungena ixesha elide ngokwaneleyo ukuxhoma onke amanabukeni alishumi elinambini ngapha nangapha kwamagama amabini.
Beka i-diapers flat kwindawo yakho yokusebenza kwaye uqale ukudweba okanye ukupeyinta ileta enye yokubulisa kwidayap nganye usebenzisa ipeyinti yokukhukhumeza. Unokwenza into elula efana neeleta zebhloko, okanye ungafumana into entle ukuba unetalente eninzi yobugcisa.
Zihombise iimpahla zokuhombisa ngezinto ezilula njengeentyatyambo ezincinci, zipeyinte okanye uzigqume ngeribhoni usebenzisa iglu eshushu okanye iglu yokhuni.
Nika i-diapers kunye ne-clothespins ixesha elaneleyo lokuma kwaye emva koko uxhome amanabukeni kumgca weengubo zempahla.
Umntwana weBhafu weThabhu yePunch Bowl
Lo mhlobiso uyonwabisa njengoko uyasebenza, kwaye iindwendwe zakho ziya kuchukunyiswa bubukrelekrele bakho. Ukuba awunayo isitya se-crystal punch isitya sokuhambisa iziselo, sebenzisa ibhafu!
Thenga ibhafu yeplastiki yomntwana kwaye uyicoca.
Songa iribhoni entle kumacala ebhafu, kwaye ubophe isaphetha esihle.
Gcwalisa ibhafu ngomkhenkce.
Yenza ifayileIresiphi yenqanawa yokuhlamba umntwanaeya kuvuyisa iindwendwe zakho. Thela imixholo yento oyenzayo ebhafini.
Emva kweshawa, coca ibhafu kwaye uyinike umama oza kubakho.
Iiparasoli ezintle zenza imihombiso eshaweni entle, ngakumbi ishawa yasentwasahlobo okanyesana afafaze. Imibala ye-pastel isebenza kakuhle kwindawo yokuhlambela umntwana, njengamaphinki aqaqambileyo okanye iblues edlamkileyo. Nazi ezinye zeendlela zokuyila zokusebenzisa iiparasols kwisitya sakho sokuhlamba umntwana:
Zibeke ecaleni kwetafile yesipho okanye kwitafile ye-buffet kunye neebhaluni ezintle ngaphakathi kwazo
Hang parasols ukusuka eluphahleni
Sebenzisa iiparasols ezincinci embindini wamalungiselelo eentyatyambo
Iibhaluni zihombiso ezithandwayo kumaqela amaninzi, kwaye oku kubandakanya neeshawa zabantwana. Ukubeka i-twist entle kwiibhaluni zakho zeshawa zosana, zinike ipop yeentyatyambo. Thenga iibhaluni ezizaliswe nge-helium kuwo nawuphi na umbala osebenza kunye nomxholo wakho wokuhlamba umntwana. Qinisekisa ukuba ibhaluni nganye inomtya omde oqhotyoshelwe kuyo. Umtya kulapho kwenzeka khona umlingo. Glue greenery kumtya apho idibana khona nebhaluni. Ngqo apha ngezantsi, fakela intyatyambo (yokwenyani okanye engeyiyo) ichaphaza leglu eshushu. Qhubeka ukongeza uhlaza kunye neentloko zeentyatyambo kumtya de ugqunywe ngokupheleleyo kwaye ube mhle ngokupheleleyo.
Ukunqwenelela umama ukuba aphile qete kunye nokunika iingcebiso yinto eqhelekileyo kwiindwendwe ezenza kwimiboniso yabantwana. Thatha la magama obulumko kwaye wenze udonga olujolise kuwo. Fumana indawo kwindawo yakho yokuhlambela eya kusebenza njengodonga lweminqweno. Thenga iphepha le-scrapbook kuzo zonke iiprinta ezahlukeneyo kunye neepeni zeSharpie. Iindwendwe mazibhale iingcebiso ezimfutshane neziluncedo ephepheni. Thepha amaphepha eludongeni ukuze wenze udonga olupheleleyo lobulumko kumama oza kubakho.
Olunye uhleko oluhle koku kukuba wonke umntu agcwalise ikhadi ngengcebiso kwaye alibeke kwimvulophu. Hlanganisa i-twine kwenye indawo kwindawo yokuhlambela kwaye uncamathisele imvulophu nganye enengcebiso kwi-twine nge-dresspin.
Iibhotshi zemvula ezintle ezizaliswe ziintyatyambo ziya kuba lulongezo olufanelekileyo lokuhombisa kubantwana ngo-Epreli. Konke okudingayo kule nto yokuhombisa ziibhutsi ezicocekileyo zemvula kunye neentyatyambo. Beka iibhutsi zemvula ecaleni kwetafile yesipho okanye nakweyiphi na indawo apho uzobe khona amehlo kwimihombiso kwaye ugcwalise iibhutsi ngeesentimitha ezimbalwa zamanzi kunye neentyatyambo ezintle. Iintyatyambo ezinde ezinde zisebenza kakuhle ngalo mhlobiso, kwaye akukho nto ithi intwasahlobo ifana nemvula kunye neetulip!
Iibhloko eziBekiweyo zaBantwana
Dlala kwiibhloko zabantwana zakudala ukutsala lohombiso we-DIY. Uya kudinga:
Iibhokisi ezi-4 zinemilo nobungakanani obufanayo
Iphepha elibrown okanye iphepha eliphefumlelweyo losana lokugubungela iibhokisi
Sika oonobumba bekhadibhodi begama: BABY
Ukwenza iibhloko ezinkulu zabantwana eziya kulunga ngokugqibeleleyo kwikona yegumbi, kuya kufuneka:
Gquma iibhokisi ezine kwiphepha elimdaka okanye iphepha elikhethiweyo lokusonga.
Sika oonobumba: B, A, B, no-Y kwisitokhwe sekhadi okanye kwikhadibhodi.
Glulela unobumba omnye kwibhokisi nganye.
Gcina iibhokisi zokufunda: 'BABY' ukusuka kwibhokisi ephezulu ukuya kwibhokisi engezantsi.
Ixabiso eliphantsi kunye nelodwa elenzelwe ukuhombisa abantwana
Yonke le mihombiso kulula ukuyenza, kwaye uninzi ayabizi kakhulu. Ngokuhonjiswa okwenziweyo, okwenziwe ekhaya unethuba lokwenza into eyahlukileyo, ke ungoyiki ukongeza ukujikeleza kwendalo kwiprojekthi nganye. Emva kwayo yonke loo nto, ukwahluka kwale mihombiso yeyona nto ibenza ukuba babonakale nangakumbi kunesihombiso esithengwe evenkileni, kwaye umama oza kuba uyihlonipha uyakuxabisa umsebenzi owongezelelekileyo owangena kwisitya sakhe sakusana.
Fairy Tales, Fables, And Poems French Imiboniso Yesilayidi Ingqokelela Yeresiphi I-Custom And Handcrafted Jew Jewelry Zilolonge E Empilo Imeko
Ukuthintela Umlilo Noku Ukhuseleko
Ngaphakathi Design Slideshows
iingoma ezibuhlungu ngokusweleka komhlobo
igama elithi "usapho oluxubileyo" luthetha a (n)
Iiarhente ezinkulu zokumodareyitha kwii-los angeles
ifowuni yam ayizukuxhuma kwi-wifi